Izindaba - Imibuzo Evame Ukubuzwa Nge-Aluminiyamu Eyengeziwe kanye Ne-Aluminium Extrusion Profiles
Q: Yiziphi iziqephu ze-aluminium extrusion ozinikezayo?/ Yiziphi izindlela zokuqeda i-aluminium ezikhona?
A: Sinikeza ijazi lamandla kanye nokuqedwa kwe-anodized okunikeza ukumelana nokugqwala okuphezulu ngemibala ehlukahlukene.Kungakhathaliseki ukuthi ufuna izidingo zokusebenza noma zobuhle, singakwazi ukunquma impushana elungile yohlelo lwakho lokusebenza.
Q: Uyini umehluko phakathi kwe-aluminiyamu ye-anodized kanye ne-aluminium eqediwe yokugaya?
A: I-aluminium eqediwe yokugaya ibhekisela emikhiqizweni ye-extrusion engazange yenziwe noma yikuphi ukwelashwa.I-Anodized aluminium iyi-aluminium eqediwe yokugaya ehamba phakathi kwe-anodization, okuyinqubo ye-electrochemical eyandisa ukumelana nokugqwala, ukuqina nokuhlobisa.
Q: Yiziphi izinketho ze-aluminium machining ezitholakalayo?
A: Sinemishini eyishumi ye-CNC, enamandla okwenza imishini eqondile nevundlile.Imishini yethu eyishumi ye-CNC iphinde ibe namandla we-4th-axis, esivumela ukuthi sigaye ama-aluminium extrusions kuma-ax amaningi ngaphandle kokushintsha amathuluzi, okwandisa umkhiqizo.
Q: Yiziphi izindlela zokuhlola nezindinganiso ozilandelayo ukuze uqinisekise ikhwalithi yemiklamo yakho ye-aluminium extrusion?
IMP: Siqinisekisa ukuthi izingxenye ezakhiwe zihlangabezana nokucaciswa okudingekayo ngokuhlola ngokucophelela okuhlanganisa ukudala igeji yangokwezifiso ukuze kuqinisekiswe ukufaneleka nokusebenza kwengxenye ngayinye uma kudingeka.Sihlinzeka ngezinsiza eziningi ze-aluminium extrusion ngenkathi silondoloza izitifiketi ze-ISO 9001:2015 kuzo zonke izikhungo zethu zokukhiqiza.
Q: Ungakwazi ukungisiza ukuklama iphrofayela entsha ye-aluminium?
IMPENDULO: Kungakhathaliseki ukuthi uza kithi nokuphrintiwe okugcwele kokwenziwa noma ingxenye yombono nje, singasebenza nawe ukuze sifeze izidingo zakho ezifanele zokuklama.Ngosizo lomklamo osizwa ngekhompyutha (CAD) kanye nokukhiqiza okusizwa ngekhompiyutha (CAM), singakusiza wenze izidingo zakho zokwenziwa.
Q: Ingabe kukhona umkhawulo kasayizi kumaphrofayili we-aluminium extrusion ongawakhiqiza?
A: Izinsiza zethu ze-aluminium extrusion zivumela ububanzi besisindo-ngonyawo obungu-0.033 ukuya ku-8 wamakhilogremu kanye nosayizi wombuthano ofike kumayintshi angu-8.
Isikhathi sokuthumela: Jun-04-2021